चिनियाँ सुप र चिया लाभ उठाउन भनेर आफ्नो शरीर गर्भावस्था समयमा - वकिल को चीन । सबै चिनियाँ वकिल अनलाइन.
गरेको यो सामना गरौं: यो सधैं सजिलो छैन हुँदा एक महिला । हाम्रो अद्वितीय शारीरिक विशेषताहरु गर्न सकिन्छ भरेको मा चार प्रमुख चरणमा मा हाम्रो जीवन: महिनावारी, गर्भावस्था, जन्म र छ । मा गर्भावस्था चरण, तपाईं एक सुन्दर नयाँ बच्चा गर्न तत्पर गर्न, तर शारीरिक र हर्मोनल परिवर्तन छौं सामना हुन सक्छ अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ, तैपनि
संग एक समग्र दृष्टिकोण स्वास्थ्य गर्न, परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा र विधि अत्यन्तै लाभदायक हुन सक्छ गर्न कम जोखिम को रोग र असहज लक्षण गर्भावस्था समयमा.
जबकि अल्पकालीन उपचार उपयोगी छन्, कुञ्जी लागि खेलकुद छ एक लामो-अवधि, स्वस्थ जीवन शैली. किन केही समय लिन ध्यान गर्न आफ्नो शरीर गरेको संकेत, जबकि को प्रभाव निश्चित खाद्य पदार्थ र औषधी आफ्नो शरीर मा. हाम्रो शरीर सबै छन्, अनुपम र एउटै रोग हुन सक्छ विभिन्न कारण विभिन्न मान्छे संग. पनि"राम्रो"आहार योजना लागि उपयुक्त नहुन सक्छ, सबैलाई यति नजिक ध्यान गर्न कसरी आफ्नो शरीर प्रतिक्रिया गर्न विभिन्न प्रकार को औषधी र आहार योजना. आज, हामी मा ध्यान केंद्रित छन् परम्परागत स्वस्थकर चिनियाँ सुप र चिया - एक शानदार प्राकृतिक तरिका लागि आफ्नो शरीर यो आवश्यकता पोषक प्राप्त दुवै पूर्व - र पोस्ट-गर्भावस्था । मा पढ्न को लागि सिफारिश चिनियाँ विधि रूपमा राम्रो तरिकाले गर्न कसरी मा सल्लाह आफ्नो शरीर ध्यान गरेको शारीरिक आवश्यकता माध्यम गर्भावस्था प्रक्रिया हो । सुरु गर्न को टिप्पणी लिन अवस्था को आफ्नो चक्र देखि चक्र लम्बाइ र अवधि गर्न, रंग, बनावट (बाक्लो वा पानी), र मात्रा (भारी वा प्रकाश) । साथै, ध्यान गर्न कुनै पनि सँगैको लक्षण यस्तो, रगत थक्के, शरीरमा सुनिएको भाग, फिर्ता दुखाइ, स्तन शरीरमा सुनिएको भाग, आदि. यहाँ दुई झन् साधारण कारक प्रभावित छन् महिला को संभावना गर्भवती बन्ने आज: जबकि, यो असम्भव छ गर्न फिर्ता बारी समय, हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौं तनाव को मात्रा को हामी भोगिरहेको छ । यो महत्त्वपूर्ण छ छैन बेवास्ता गर्न को अवस्था हाम्रो मासिक"आगन्तुक"रूपमा हाम्रो चक्र राम्ररी सम्बन्धित छन् कि वा छैन, हामी कल्पना गर्नु सक्षम छ । सक्षम भएर व्यक्त गर्न र निकास हाम्रो भावना मा एक स्वस्थ तरिका पनि उपयोगी गुणस्तर सुधार मा हाम्रो चक्र र संभावना को अवधारणा छ । म सिफारिस पिउने चिया गुलाब (गर्छ जिगर संसोधन गर्नु र नियमन मासिक धर्म) अप गर्न एक हप्ता अघि आफ्नो आशा अवधि । यो चिया विशेष गरी सन्चो लागि ती अन्तर्गत एक ठूलो राशि, को तनाव छ । आफ्नो शरीर माध्यम जान्छ परिवर्तन धेरै प्रारम्भिक समयमा गर्भावस्था गर्न अनुकूल गर्न बढ्दो भ्रूण । समयमा पहिलो तीन महिना मा, आफ्नो बच्चा गरेको आकार वृद्धि छैन पनि धेरै, त्यसैले त्यहाँ छैन आवश्यक तुरुन्तै सुरु खाने अधिक.
यसको विपरीत मा, तपाईं अनुभव हुन सक्छ पूर्णतया सामान्य गर्भावस्था जस्तै लक्षण बिहान रोग, चक्कर आना, गति रोग र सामान्य घृणा, त्यसैले यो सिफारिस गरिएको छ, तपाईं खान कि सानो, बारम्बार भोजन सट्टा.
यदि तपाईं अनुभव गर्दै छन् गंभीर लक्षण, तपाईं विचार हुन सक्छ सल्लाह खोजी देखि एक डाक्टर वा एक दर्ता चिनियाँ चिकित्सा व्यवसायी छ । तयारी विधि: कुल्ला सबै सामाग्री राम्ररी छ । कुक अन्डा मा पानी र हटाउन खोल । खन्याउनु, चिसो पानी पट मा, सामाग्री थप्न, र खाना भन्दा उच्च गर्मी सम्म उम्लिरहेको छ । स्विच कम गर्मी कुक र एक घण्टा थप्दा, क्रिस्टल चीनी स्वाद । यो पिउन चिया एक पटक एक हप्ता. आफ्नो बच्चा बढ्छ, आफ्नो झन् खचाखच भरिएको गर्न प्रमुख, सुनिंनु, प्रभावित आन्दोलनहरु, र पनि कब्जियत छ । यदि तपाईं अनुभव गर्दै छन् र कडा सुख्खा मल, वा अन्य गर्मी-सम्बन्धित लक्षण यस्तो आँखा, सुक्खा मुख, नासूर घाउहरु वा, तपाईं जोगिन प्रयास गर्नुपर्छ खाद्य पदार्थ खाने छन् भनेर तातो प्रकृति मा सहित, बदाम, तरकारी र मसालेदार खाना । पनि, अधिक रूपमा र रगत केंद्रित मा भरण को भ्रूण, यो महत्त्वपूर्ण छ ध्यान गर्न चिनियाँ फियो र कलेजो बृद्धि गर्न रगत र उत्पादन राम्रो गर्न पोस्ने (कम संभावना सामना गर्न खुट्टा). तयारी विधि: कुल्ला सबै सामाग्री राम्ररी छ । पान-भुट्नु साफ माछा तेल, अदुवा र वसन्त प्याज मा दुवै पक्ष अलिकति सम्म स्वर्ण, त्यसपछि खन्याउनु, पानी पट मा. थप्न सबै सामाग्री र कुक भन्दा उच्च गर्मी सम्म उम्लिरहेको छ । स्विच कम गर्मी कुक र एक अतिरिक्त लागि. पाँच घन्टा छ । स्वाद नुन जोड । तयारी विधि: कुल्ला सबै सामाग्री र पतले काट फलहरू. खन्याउनु को पानी मा एक पट र थप पाइन पागल, नेभारा, र चामल कुक भन्दा उच्च गर्मी सम्म पानी फोडे.
त्यसपछि स्विच गर्न कम गर्मी र तीस मिनेट कुक, वा सम्म पुग्छ एक मनमोहक. अन्तमा, थप्न कालो तिल पाउडर पुरातन चिनियाँ बुद्धि"भनेर भन्छ चिसो खाद्य पदार्थ"को लागि उपयुक्त छन् लेट गर्भावस्था मा महिला, तर यो महत्त्वपूर्ण छ.
पुन जोड परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा विश्वास सिन्ड्रोम र उपचार प्रत्येक रोग संग उपयुक्त उपचार र दबाइ । हाम्रो शरीर अद्वितीय छन्, र पनि समयमा परिवर्तन विभिन्न समयावधिको को हाम्रो जीवन । महिला संग एक कमजोर संविधान हुँदैन पनि धेरै खाने"चिसो"खाना समयमा सम्पूर्ण गर्भावस्था ।"चिसो"छन् कि खाद्य पदार्थ अक्सर"सिफारिश"को लागि लेट गर्भावस्था मा महिला, यस्तो तरभुजा, घाँस जेली र आइसक्रिम । आनन्दित यी खाद्य पदार्थ एक पटक एक हप्ता स्वीकार्य छ मा निर्भर गर्दछ, आफ्नो शरीर संविधान । लागि तयार गर्न श्रम, यो पनि उपयोगी छ एक कप पिउन चावल को चिया वा नम्र- सूप हरेक दिन यो महिना, र मा संलग्न न्यानो कार्डियो व्यायाम यस्तो हिडाइ रूपमा वा स्विमिंग. तयारी विधि: कुल्ला सबै सामाग्री राम्ररी छ । खन्याउनु, को पानी मा एक पट, सामाग्री थप्न, र खाना भन्दा उच्च गर्मी सम्म उम्लिरहेको छ । स्विच कम गर्मी कुक र एक अतिरिक्त लागि - मिनेट । चिया तयार छ एक पटक पानी उत्तेजित गर्दछ एक दूधिया सेतो रंग । मात्र उपभोग पानी र राख्न छैन एकै रातमा छ । यो चिया को लागि उपयुक्त छ सारा परिवार । चामल चिया सजिलो छ लागि चिनियाँ तिल्ली गर्न बिग्रनु र अवशोषित, त्यसैले बनाउँछ एक ठूलो उपाय लागि आफ्नो शरीर स्वास्थ्यलाभ गर्नु गर्न देखि कुनै पनि रोग, विशेष गरी पखाला वा बस देखि एक लामो दिन ।, सेलिब्रिटी टाउको व्यवसायी मा चुनाव क्लिनिक, एक कदम अगाडी जान्छ बढाने मा पुरातन प्रचलन संयोजन गरेर परम्परागत पूर्वी दृष्टिकोण संग आधुनिक पश्चिमी तरिका छ । उनको मुख्य उद्देश्य मा चुनाव क्लिनिक छ बहाल गर्न विरामीहरु निको तरिका प्रयोग भनेर पुल, दुवै संसारहरू को सबै भन्दा राम्रो छ । हामी स्वच्छ, पसिना, तान्नुहोस्, सानो गाडी माथि र तल पहाडी र साहसी लामबद्धहरू मा, बस तपाईं ल्याउन नवीनतम समाचार मा के तातो को दुनिया मा बाबु आमा मा हङकङ ।.
कसरी खोस्नु आमा आमाबाबुको अधिकार छ ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੀਨ - ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ - ਬੀਜਿੰਗ - ਸ਼ੰਘਾਈ